toradroa môtroka avo lenta, dc toriteny môtô, vidiny toromarika toradroa
toradroa motera avo lenta torak'izany amin'ny vidiny mora indrindra amidy
Mividianana maotera toradrano avo lenta ary alefaso maimaimpoana maivana aminay izao.
Midira motera torolalana
Mandeha amin'ny fiara maotera torolalana
Motors Torque dia motera kitapo tsy misy rafitra misy rotor maharitra mandrakizay sy stator misy laminated. Ny actuall anao dia tokony handrehitra ny voanjo anao amin'ny Tesla Model S.
Toraky ny maotera dc
Ny motera torque dia nahazo tombony lehibe tamin'ny fahalalana azo tamin'ny fanaovana motera tsipika.
Telo Fandefasana Toriteny Telo telo
Ny motera torsi dia motera EC, na amin'ny teny hafa dia motera AC tsy misy borosy. Manokana, misy karazana maotera torque drive mivantana roa. Dingana telo an'ny TeFC tsy tapaka Torque Motors.
Moto tsy misy maotera mahery vaika
Motera tsy misy fangarony mahery vaika, motera elektrika & mpamokatra herinaratra mahery vaika tsy misy rafitra BLDC tsy misy ohatra izany miaraka amin'ny herin'ny hery sy tora-pasika, malama sy fahombiazana.
Motera lozisialy sy indostriansy ambony amin'ny vidiny lafo indrindra any Sina
Fanamboarana fiara miloko Sogears avo
Manome vokatra avo lenta sy ambany vidy izahay. Ny motera torolalana dia endrika manokana moto elektrika izay afaka miasa mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ny traikefa amin'ny famokarana môtôta taona dia manome anao moto kalitao sy maharitra kokoa. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay, dia ho faly hanampy anao izahay!
Mianara bebe kokoa momba anay.
Alefaso anay ny fanadihadiana?
Raha misy aminao ireo vokatra ireo dia azafady mba mifandraisa aminay! Vonona izahay ary miandry ny fiaraha-miasa avy amintsika. Isika dia mitondra tombony toy ny tombony sy ny vidiny ambany indrindra fa am-pahatsorana.